Chhaharaa | न्यायलयमा मल्लयुद्ध कहिलेसम्म?
न्यायलयमा मल्लयुद्ध कहिलेसम्म?
काठमाडौं । छसस । कालरात्री भनिने पञ्चायती राजमा समेत न्यायलय र न्यायधीशहरुको सवालमा आँच पुग्ने खालका कुनै पनि प्रकारका टिकाटिप्पणी गर्न हिच्किच्याउनुपथ्र्याे । र अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरे मानहानी समेतको मुद्दा लाग्नसक्थ्यो । तर अहिले गणतान्त्रिक कालमा न्यायलयका सर्वाेच्च निकाय सर्वाेच्च अदालत प्रांगणमै न्यायलय र न्यायमुर्तिहरुको धज्जी उडाइन्छ । न्यायधीशहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, न्यायलय भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ भनि स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै भनेका छन् । यसरी न्याय निसाफ दिने न्यायलय र न्यायमुर्तिहरुनै भ्रष्टचारी भएपछि सर्वसाधारण जनताले कसरी न्याय पाउलान् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
न्यायलय क्षेत्र केही हप्तायतादेखि डामाडोलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको
छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्ष र विपक्ष बीच भाले जुधाईको अवस्था छ । न्यायलयको सवालमा भएको यस्तो मल्ल युद्धले देशलाई कुन दिशातर्फ मोड्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानन्यायधीश बिचौलियाहरुको नाइके हो भन्दै बार एसोशियसनको छत्रछायामा कालोकोटधारीहरुले केही हप्ता यतादेखि उनको राजिनामाको माग गरिरहेका
छन् । अदालत परिसर भित्र संगीन धारीहरुको दमन बढेपछि बार एसोशियसनले आफ्नो संघर्ष अरु तीव्र पारेको छ । बार एसोशियसनको भनाइ यदि सहि र सत्यमा आधारित भए प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर
जबराले एकदिन पनि न्यायलयको उच्च अहोदामा रहन युक्तिसंगत ठहर्दैन । उनले नैतिकताको आधारमा राजिनामा
दिनैपर्छ । सहज वर्हिगमनको एकमात्र विकल्प राजिनामा मात्र हो । यसरी मात्र उनको व्यक्तित्व र पदको गरिमाको
साथै न्यायलयको साथ जोगिन सक्छ । राणाले यसरी नै लेडेढिपी छोडेनन् र राजिनामा दिएनन् भने उनी महाअभियोगको भागिदार समेत बन्न सक्दछन् । कानून व्यवसायीहरु र न्यायलयको सर्वाेच्च पदबीचको यस्तो मल्ल युद्धले मुलुकमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ यसतर्फ पनि कानून व्यवसायीहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यस प्रकारको आन्दोलनले सर्वसाधारणहरुको काम नै ठप्प हुने हुँदा पनि दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने हुन्छ । न्यायको निमित्त लड्ने वकिलहरु र न्याय दिने सर्वाेच्च व्यक्तिहरु नै यसरी मल्ल युद्धमा उत्रन्छन् भने मुलुक र जनतालाई कसले देला न्याय निसाफ ? गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।